Ukuphatha iseva ye-OpenVZ (III) | Kusuka kuLinux
Ukuphatha iseva ye-OpenVZ (III)
Kamisama666 | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Sanibona futhi, nonke. Namuhla sizoqhubeka nalolu chungechunge lwezihloko eziphathelene nokuphathwa kwe- I-OpenVZ. Ku okuthunyelwe kwangaphambilini sihlanganisa konke okuphathelene ukufakwa kusuka ku-OpenVZ.
Ngakho-ke, uma konke kuhambe kahle, kufanele ngabe sesivele sinesiphakeli sethu I-OpenVZ ifakiwe futhi ilungele ukuqala ukusebenza nayo.
Namuhla sizokhuluma ngakho konke okuphathelene nokuphathwa kwe- iziqukathi, kokubili ukudalwa kwayo nokucushwa kwayo kanye nokuphathwa kwayo.
1 Ukwakha iziqukathi
2 Ukulungiswa kwesitsha
3 Ukuphathwa kweziqukathi
I-Los iziqukathi o Wena Kuyizindawo ezingokoqobo (imishini ebonakalayo) esizokwakha futhi siyiphathe neseva yethu I-OpenVZ. Ukuze sizidale sidinga ukuba nesifanekiso.
I-Los izifanekiso ziyimodeli okuzokwakhiwa ngayo isitsha. Ziqukethe amaphakheji ahlukahlukene adingekayo wokusebenza kohlelo nezinye izinhlelo zokusebenza eziyisisekelo, kanye nayo yonke imethadatha (i-template cache) yokwakha nokulungisa umshini.
Kunezifanekiso ezihlukile ukwabiwa de Linux. Ezinye zazo zinakekelwa ngokomthetho kanti ezinye ziyiminikelo evela emphakathini.
Indlela elula yokuzithola ukusebenzisa eyodwa ye izifanekiso ezenziwe ngaphambilini. Lokhu kutholakale ngokwakha isitsha esivela kuthempulethi bese sikupakisha kufayela gzip.
Lawo mafayili acindezelwe kuzoba yiwo esizowalanda futhi lapho sizokwakha khona iziqukathi zethu. Ngale ndlela ukwenziwa kweziqukathi kushesha kakhulu futhi kulula kunakuqala, lapho i-cache bekufanele yenziwe ngesandla. Ukuphela kokufanele ukwenze namuhla ukulanda ifayili lokusabalalisa kwakho okukhethiwe kusuka kuleli khasi:
Uma sekulandiwe, siyayigcina njengoba injalo kule nkomba kuseva yethu:
Manje sesingadala eyethu iziqukathi kusuka kuzifanekiso ezifakiwe. Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuthi isitsha ngasinye sine-id yezinombolo ehlotshaniswa nayo ekhonza ukukhomba ama-VE nokuthi ayikwazi ukuphindwa ngaphakathi kwendawo efanayo yokubamba.
Futhi, i-ID kufanele ibe nkulu kune-100, ngoba omazisi abavela ku-0 kuye ku-100 basetshenziswa uhlelo.
Ukuphatha iziqukathi, umyalo obaluleke kakhulu ngu vzctl. I-syntax elandelayo isetshenziselwa ukudala isitsha esisha:
#vzctl create --ostemplate template --config config_file
Ku-ostemplate sibeka igama le-template esililandile ngaphambili. Ipharamitha yokumisa iyakhethwa. Kuyo ufaka igama lefayela elinokulungiselelwa okuchazwe ngaphambili kweziqukathi.
Uma singakucacisi, kuzofanele sibabeke ngesandla. Amafayela wokumisa atholakala ku:
Amagama wamafayela analesi sakhiwo:
Okuvamile kakhulu basic (ve-basic.conf-isampula). Singazisebenzisa lezo ezidalwe ngokuzenzakalela noma esizenzele zona. Kunoma ikuphi, wonke amanani acacisiwe angaguqulwa ngokuhamba kwesikhathi.
Isibonelo, ukudala isitsha esine-ID 101, kusuka kuthempulethi yedebian esiyilandile ngaphambili futhi sisebenzisa ukucushwa okuyisisekelo, sisebenzisa:
#vzctl create 101 --ostemplate debian-6.0-x86 --config basic
Manje njengoba sidale isitsha sethu, sesingaqhubekela phambili ukusilungisa. Kulokhu sisebenzisa i-syntax elandelayo:
#vzctl set --parametro valor --parámetro valor […]
Kunemingcele eminingi esingayilungisa. Ukuxhumana nabo, sonke singaya kwincwajana ye-vzctl (#umuntu vzctl) noma ku- ukuvulwa kwe-wiki.
Ukuze sikwazi ukuwashintsha, agcinwa ngemuva kokuvala uhlelo okufanele silungeze -londoloze ekugcineni komyalo. Uma kungenjalo, kuzohlala kuze kube ukuvalwa okulandelayo.
Lapha sizochaza eminye yemiyalo eyisisekelo:
Lungiselela isitsha ukuthi siqale lapho ikhompyutha iqala noma cha.
Cacisa igama lomethuleli lekhompyutha
Faka ikheli le-IP kudivayisi. Ziyangezwa ngokuqoqwa.
Uma sifuna ukususa noma yikuphi kwalabo abakhelwe ngaphambili okufanele sisebenzise:
Lungiselela ikheli lamaseva we-DNS. Ungasebenzisa le nketho kaningi kumyalo ofanayo ukumisa amaseva amaningi. Ukwenza kanjalo kuzobhala ngaphezulu wonke ama-nameservers amisiwe ngaphambilini.
Setha iphasiwedi yomsebenzisi wesistimu. Uma ingekho, yakhele. Kunconywa ukuthi ungasebenzisi le pharamitha ndawonye nabanye. Akudingi ukusetshenziswa save ngale pharamitha.
Ikhombisa ukuhleleka lapho umshini uzoqala khona ekuqaleni. Ukuphakama kwenombolo, kuzobekwa phambili kuqala. Uma kungalungiselelwe, kubhekwa njengokuhamba phambili okuphansi kakhulu futhi noma yisiphi esinye isitsha esimisiwe sizoqala kuqala.
Ekugcineni, ngikushiya njengesibonelo ukwenziwa kokucushwa okuyisisekelo kwesiqukathi esingu-101
#vzctl setha i-101 - ukuqala kabusha yebo - igama lomsebenzisi virtualhost --ipadd 192.168.1.10 --nameserver 8.8.8.8 --nameserver 4.4.4.4 --save #vzctl isethwe 101 --userpasswd izimpande: 1234
Lapho iziqukathi zethu sezenziwe futhi zamiswa, singakwazi ukuzilawula. Ukwenza lokhu, sizophinda sisebenzise umyalo we-vzctl. Eminye imiyalo eyisisekelo yokuphatha iziqukathi ibhalwe ngezansi:
#vzctl start ID
#vzctl stop ID
Imisa isitsha ngaphandle kokulinda ukuthi zonke izinqubo zalo zime
#vzctl stop ID --fast
Kusitshela isimo sesitsha
#vzctl status ID
Chitha isitsha. Ngaphambi kokuthi kudingeke ukuthi uyimise.
#vzctl destroy ID
Ungena emshinini ngentambo yomyalo njengokungathi sitholakale nge-ssh.
#vzctl enter ID
Qalisa umyalo ngaphakathi kwesitsha.
#vzctl exec ID comando
Faka kuhlu iziqukathi ezisebenzayo kuseva. Ngenketho -a futhi hlela ababoshiwe.
Lokho konke okwanamuhla. Ngalokhu siphetha ingxenye eyisisekelo yokuphathwa kwe I-OpenVZ.
Kuzindatshana ezimbalwa ezilandelayo sizokhuluma ngezinqubo ezithuthuke kakhulu, njengokuphathwa kwezinsizakusebenza, ukwenza Ukusekela ngokulondoloza noma ukusetshenziswa kwe ploop.
Kuze kube yileso sikhathi, ungazama konke esikuchazile kuze kube manje. Njengenjwayelo, shiya noma yimiphi imibuzo onayo kumazwana bese sikubona maduze. Impilo ende nokuchuma.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukuphatha iseva ye-OpenVZ (III)
Indatshana enhle kakhulu !! 😉
Ngibona kakhulu!. Ngijabule kakhulu ngokuthi ngikwazile ukushicilela lezi zihloko. Ngizoqhubeka nokusebenza kanzima futhi ngibambisane lapho ngikwazi khona. Impilo ende nokuchuma.
Ama-athikili athakazelisa kakhulu nge-OpenVZ. Ake sibone ukuthi uyangikhuthaza yini ukuthi ngiyizame, ngibe neso lami kule ndaba isikhathi eside. Lapha ngishiya imibono embalwa:
Angazi ngokuphelele ukuthi i-OpenVZ isebenza kanjani, futhi omunye wemibuzo emikhulu enginayo yingakho kudingekile ukusetha ukumiswa kwenethiwekhi ngesandla komshini ngamunye. Awukwazi ukuyivumela ukuthi ithole kusuka kuseva ye-DHCP? Lokho wukuthi, ungayinikeza ibhuloho le-MAC + bese imishini izilawula ngokwabo ukuthola ukucushwa kwenethiwekhi? (Ngoba ezindabeni ezimayelana ne-OpenVZ engikwazile ukuyifunda ihlale ihlelwe nge-IPv4, kepha kuthiwani nge-IPv6?)
Ngaphezu kwalokho, uma bekufanele ngilungiselele ngokwezibalo izilungiselelo zenethiwekhi, yini engalungile ngokukwenza kusuka "ngaphakathi" komshini? Futhi yini lokho ukwabela igama lomethuleli kusuka kumsingathi? Ngamafuphi, kubonakala kungafuneki futhi kungadingekile kimi, futhi ngithanda ukwazi ukuthi kungani kudingekile noma kunconywa.
Ngendlela, angazi ukuthi uzothinta yini le ndaba, kepha ngingahle ngibe nentshisekelo ku-athikili yezokuphepha nobumfihlo ekusetshenzisweni kwe-OpenVZ. Ku-VirtualBox ngijwayele ukungabonani "noma ngibonane nomsingathi ngaphandle uma ngifuna ukusebenzisa amafolda wenethiwekhi noma abelwe. Ngiyazibuza, ngokwesibonelo, bukhona ubungozi obukhona ekumiseni i-honeypot ene-OpenVZ. Ngiphawula ngalo njengombono uma kwenzeka ufuna ukubhala ngakho.
Ngijabule kakhulu ukuthi uyakuthanda okuthunyelwe futhi ngiyakukhuthaza ukuthi uzame i-OpenVZ. Uzobona ukuthi kulula ngendlela emangalisayo ukuphatha.
Mayelana nokungabaza kwakho, iningi lihlobene nezinto esingakhulumi ngazo okwamanje. Kepha ngizokunikeza isingeniso esincane sokuzixazulula.
Into yokuqala okufanele uyazi ukuthi ku-OpenVZ kunezinhlobo ezimbili zokucushwa kwenethiwekhi. I-Venet noma i-veth ingasetshenziswa. Eyokuqala ifana nenethiwekhi yangasese, okusho ukuthi, itholakala kuphela kuziqukathi nakusokhaya ophathekayo. Emehlweni eminye imishini kunethiwekhi kuba sengathi ayikho. Ngakolunye uhlangothi, i-veth yikhadi lenethiwekhi elibonakalayo elenza isitsha sisebenze njengenye ikhompyutha kunethiwekhi futhi singatholwa eminye imishini. Ibuye ivumele izinketho ezisezingeni eliphakeme njengokusebenzisa i-DHCP noma ukumiswa kwenethiwekhi ngaphakathi kwesitsha.
Ngokuphathelene ne-IPv6, zombili izindlela ziyayisekela. Ungasebenzisa umyalo we-ipadd ngekheli le-ipv6 ngaphandle kwezinkinga. Vele, nge-venet akuzona zonke izici ezisebenzayo. Njengoba ikhadi le-venet lingenayo i-MAC ehambisanayo, izinto ezifana nokutholwa komakhelwane noma izikhangiso ze-router azisebenzi.
Mayelana neqiniso lokuthi kufanele ulungiselele izici ngaphandle, ngombono wami, kuyindlela yokwenza lula umsebenzi wabaphathi. Ikuvumela ukuthi ushintshe izici kalula futhi ungayishintsha ngokuzikhandla. Futhi, njengoba ngishilo ku-athikili, ungadala imodeli yakho yokumisa lapho uzokwakha khona imishini, ngaleyo ndlela uqede izinhlungu eziningi zekhanda.
Okokugcina, maqondana nokuphepha, ukusebenzisa i-OpenVZ ekudaleni i-honeypot kunconywa kakhulu. I-OpenVZ ihlukanisa ngokuphelele iziqukathi ohlelweni lomzimba futhi ibonakale ingokoqobo kumhlaseli. Futhi konke lokhu kusetshenziswa okuphansi kakhulu kwezinsizakusebenza. Kuyindlela enhle yokwakha ama-honeypots (yize kunezinketho ezilula futhi ezibhekiswe ngqo kuwo).
Ngiyethemba ngikuxazulule ukungabaza kwakho. Uma unanoma yisiphi esinye noma isihloko ongathanda ngisibhalele, ungangabazi ukusho njalo. Sizobonana maduze. Impilo ende nokuchuma.
Sawubona, lolu chungechunge lokuthunyelwe luhle kakhulu, bengifuna ukubheka okulandelayo: Ngizama ukubuyisa izipele ezithile zeziqukathi ze-OpenVZ (amanye amafayela we-.tar) asebenza kumsingathi nge-Ubuntu Server, zenziwa ngokulandelayo umyalo:
i-vzdump –susa i-ID - i-imeyili ezimpandeni –dumpdir / izipele / ifayela
Lo mphathi unenguqulo elandelayo: vzctl version 3.0.22
Manje umqondo uzokwazi ukubuyisela lezi ziqukathi kuseva yeCentOS 6. Lapho ngakha ama-VM amasha anginankinga, kepha angiyitholi indlela yokubuyisa lezi zipele (kuCentOS nginenguqulo elandelayo: inguqulo ye-vzctl 4.7.2)
Futhi-ke lokhu kuzoba okuthunyelwe 😉 😀
Ngokwalokho engikubonile iningi labo likhuluma ngokusebenzisa i-vzrestore, noma i-vzdump –restore, kepha angikwazi ukubuyisela ukusebenza. (Anginayo i-vzrestore ku-CentOS 6 futhi anginayo ifulegi le- -restore ku-vzdump noma) Impela kukhona okungiphunyukayo ngenxa yokuntula ulwazi ngale ndaba 😛
Nayi imibuzo elandelayo:
Kungenzeka ukwenza lokho engikufunayo? Noma yisiphi isithiyo?
Kungaba yini indlela yokwenza? Ngabe kufanele ngifake i-vzrestore ngandlela thile?
Siyabonga ngeminikelo yakho, imikhonzo
Sawubona, ngiyabonga ngokuphawula kwakho.
Mayelana nemibuzo yakho, empeleni akufanele kube nankinga. Eqinisweni, ngiyakhumbula ukuthi ngathola lokhu kudala futhi ngakuxazulula ngaleso sikhathi. Kepha njengamanje anginakho ukufinyelela kwemibhalo engizenzele yona futhi, ngoba angisayithinti isikhathi esithile, angisakhumbuli. Kepha ungalilahli ithemba, ngizofaka umshini one-OpenVZ ngomzuzwana bese ngizokuxazululela wona isikhashana. Futhi-ke ngendlela, mhlawumbe ngizobuyela kulolu chungechunge lwezikhala, engikushiyile okuncane.
Impilo ende nokuchuma.
Ngiyabonga ngempendulo yakho, ngingajabula kakhulu uma uyibona.
(Ngaphezu kwalokho, okuthunyelwe okusha okungaphuma ngale ndaba kuyasiza impela)
Enye yezinto engidonsela amehlo ukuthi ku-CentOS 6.5 engiyifaka lawa ngamathuluzi ayifakayo:
vzcalc, vzcptcheck, vzctl, vzdqdump, vzeventd, vzifup-post, vzmemcheck, vznetaddbr, vzoversell, vzquota, vzstats, vzubc, vzcfgvalidate, vzcpucheck, vzdqqchem, vzm, vzm, vzm, vzm, vzm, vzm, vzm, vzm
Ngokulandela izinyathelo ezisezincwadini ezisemthethweni: https://openvz.org/Quick_Installation_CentOS_6
Futhi kumafulege engiwabona kumuntu we-vzdqdump anginayo ifulegi le- -restore. Ngiyabona futhi ukuthi kumuntu we-vzctl nginezimpawu ezithile -snapshot * kepha angazi noma ngabe yilokho engikufunayo noma ukuthi ngingakusebenzisa kanjani ngqo.
Ngemuva kokulwa ne-openvz nobukhulu obubabazekayo bemibhalo yayo, ngicabanga ukuthi sengikutholile ekugcineni. Ekugcineni udinga ukusebenzisa i-vzrestore, eza nenqwaba ye-vzdump. Kepha ku-CentOS akufakiwe futhi kufanele ukwenze ngesandla. Inqubo ididekile (yanele nje ukushaya ikhanda lakho ngekhibhodi) ngakho-ke ngithuthukise i-athikili kubhulogi lami engilivule kamuva nje.
i-url yile: https://kamisama666.github.io/2014/07/instalacion-vzdump-centos6/
Ngiyethemba ngibe wusizo, uzongitshela ukuthi kuhambe kanjani. O, futhi njengoba ubuza, inketho ye- "isifinyezo" isebenza kuphela kuziqukathi zohlobo lwe-ploop, okuyindlela ehlukile yokugcina kunokwejwayelekile ku-openvz. Okuthakazelisa ngokwengeziwe "ukumisa okwesikhashana" kanye "nokubuyisela", okwazi ukugcina isimo sesitsha bese usibuyisela emuva kwesikhathi (kepha cha, asihambisani ne-vzdump). Nokho, ukubona ukuthi ngiyaqala yini okuthunyelwe futhi ngikhulume ngalezi zinto.
Awazi ukuthi ngikwazisa ini lokho okuthunyelwe. NgoMsombuluko ngizozama bese ngikutshele, ngibheke phambili kuwe ukuthi uqale kabusha uchungechunge olusha lokuthunyelwe ngale ndaba. Futhi ngizokwabelana ngokuthunyelwe kwakho ukuthi omunye umuntu ukuthole kuwusizo 😉 Ngizokutshela ukuthi bekunjani ngoMsombuluko, imikhonzo.
Ngiyajabula ukuthi kukusizile. Eqinisweni, selokhu ngenze okuthunyelwe, ngakusebenzisa futhi ngakushicilela ku-desdelinux ukuze abantu abaningi bakubone. Ungayithola lapha:
Impilo ende nokuchuma
Mngani, nginenkinga yokulandela izinyathelo zokumisa, umbuzo ngukuthi kusuka emshinini lapho ngilungiselela khona i-VM yami entsha kuyabonakala, kepha kusuka engxenyeni yenethiwekhi akubonakali, ngokwesibonelo:
Nginesigaba 1. *, umphathi wami u-A une-1.50 kanti i-VM B entsha ine-1.201, kusuka kumshini A ngiyabona B, kepha hhayi kusuka kwenye ikhompyutha exhunywe kunethiwekhi efanayo,
Ungangifanekisa kulokho engihluleka khona
I-athikili enhle kakhulu futhi yangisiza kakhulu, manje umbuzo, nginesitsha esivele sisakhiqizwa ngesifanekiso se-debian-7 futhi ngifuna ukusibuyekeza ku-debian-8 isitsha esifanayo, kufanele ngenze kanjani?
Sawubona ngiyabonga kakhulu. Nginqanyuliwe ku-OpenVZ isikhashana kepha ngizozama ukukusiza ngangokunokwenzeka.
Okokuqala ngingasho ukuthi, uma kungenzeka, uzocabanga ukudala isitsha esisha kunethempulethi ye-Debian 8 bese uthuthela kancane kancane idatha nokucushwa kusuka esitsheni esidala kuya kwesisha. Ngemuva kwalokho kufanele ubeke i-IP yomshini wakudala kokusha futhi kulungiswe. Kuyindlela elula futhi elula kunazo zonke ekhona.
Ngakolunye uhlangothi, uma lokhu kungenzeki nganoma yisiphi isizathu, ngombono kungenzeka ukuthi uvuselele i-distro ngaphakathi kwesitsha uqobo njengoba ubungenza kunoma yimuphi omunye umshini we-Debian. Kepha ngizwile kubantu abebenezinkinga ngalokhu, ngakho-ke okokuqala zama ngesinye isitsha. Futhi uma unezinkinga nazi izingosi ezimbalwa ezikhuluma ngokuthi zingaxazululwa kanjani (ngesiNgisi):
Bheka ikakhulukazi eyokuqala, okuyinto yakamuva kakhulu futhi ichaza konke kuwe igxathu negxathu.
Vele, ngaphambi kokwenza ushintsho esitsheni sakho ekukhiqizeni, akudingekile kimi ukuthi ngikutshele ukuthi wenze isipele sesitsha, kubande noma kushise njengoba kukufanele, uma kwenzeka kukhona okungahambi kahle.
Ngiyethemba ngisizile. Impilo ende nokuchuma.
Sawubona ngiyabonga kakhulu. Nginqanyulwe ku-OpenVZ isikhashana kepha ngiyethemba ukuthi ngingakusiza.
Okokuqala, uma kungekho lutho olungakuvimba, ngincoma ukuthi udale isitsha esisha ngesifanekiso seDebian 8 bese uthuthela konke ukucushwa, idatha nesoftware lapho. Lapho konke kusebenza, kufanele ushintshe i-IP yesitsha esidala bese usifaka esisha. Kuyindlela elula futhi esheshayo ngempela.
Uma ngasizathu simbe kungenzeki ukuthi ukwenze lokhu, ngombono kungenzeka ukuvuselela ukusatshalaliswa okuvela ngaphakathi kwesiqukathi uqobo. Kufanele nje ukwenze njengoba ubungakwenza kumshini ojwayelekile we-Debian. Kepha ngizwile ngabantu abebenezinkinga, noma kungafanele kwenzeke uma ugcina i-host kernel ivuselelwa. Noma kunjalo, into enhle kunazo zonke ongayenza ukuzama ukuvuselela ngesinye isitsha esine-debian 7 ukuze uqiniseke ukuthi ayinikezi izinkinga. Futhi uma uthola noma yikuphi, nanka amanye amakhasi akhuluma ngokuthi ungayilungisa kanjani (ngesiNgisi):
Okuthakazelisa kakhulu owokuqala, okungowamuva kakhulu futhi ochaza konke igxathu negxathu.
Noma kunjalo, akudingeki ukuthi ngikutshele ukuthi, noma yini oyinqumayo, ungenzi lutho ngesitsha ekukhiqizeni ngaphandle kokuqala ukwenza isipele, kungaba kushisa noma kubande, uma kwenzeka okuthile.
Ngiyethemba ngikusizile. Impilo ende nokuchuma
Ngiyabonga ngokuphendula, usizo lukhulu, ngizofunda i-athikili bese ngenza izivivinyo ezimbalwa bese ngikutshela ukuthi yikuphi okuhle kakhulu, imikhonzo.
Sawubona okuhle, nginephutha ngeziqukathi ze-openvz futhi angitholi mqondo. Ukubona le bhulogi ngengxenye yamazwana ngingenisa umbuzo lapha uma kungenzeka othile angangisiza.
Ngifake i-openvz ngaphandle kwenkinga futhi ngakha iziqukathi ngaphandle kwenkinga, ngafaka insiza elula yewebhu kwesinye sazo futhi ngafinyelela kuyo.
Iqiniso ngukuthi lapho uzama ukwenza isibuyekezo, ngokwesibonelo: »i-apt-get update» lokhu kungitshela ukuthi ayinakho ukuxhumana nezinqolobane ze-ips futhi ayilandi lutho, ngakho-ke angikwazi ukubuyekeza noma ukufaka amaphakheji amasha. Uma ubamba la ma-ips, kukhona okuthile engikukhumbulayo?
Kungithathe isikhathi eside ukuphendula kepha ngathola isixazululo kudala futhi bengingafuni ukusishiya emoyeni.
Inkinga bekungukuthi angihlakaniphile kakhulu, imvamisa kungumthombo wezinkinga zami eziningi, bengine-nateo eqondisa kabusha yonke into efike nge-port 80 iye kummeleli obuyela emuva, lapho yenza isibuyekezo sokuthola kahle, yasungula kepha izimpendulo zaqondiswa kabusha eqenjini, ukulungisa ama-iptables kuyixazulula kahle futhi konke kuhamba kahle, njengoba kunengqondo.
Ngiyabonga ngokufaka ku-OpenVZ, kungisizile ukuyilungisa kahle
I-PS: Ngifunde ukuthi izibuyekezo zenziwa nge-port 80, bengicabanga ukuthi ngisebenzisa okungahleliwe kusuka ku-1000 ...
I-AjudaLinux! Inguqulo 0.2.0!
Kanye, uLinus unikeza izithupha ze-NVIDIA